Pop-Up Camera များဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖုန်းဒီဇိုင်းအတွက် အလန်းစားလား ? အဂွမ်းစားလား? – DigitalTimes.com.mm
0 Shares 5195 Views
Pop-Up Camera များဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ် ဖုန်းဒီဇိုင်းအတွက် အလန်းစားလား ? အဂွမ်းစားလား?
Ko Thuya Jul 04, 2018
Oppo Find X နဲ့ Vivo Nex တို့ဟာ ဒီနှစ်ရဲ့ Wow ဖြစ်စေတဲ့ ဖုန်းနှစ်လုံးပါ။ သူတို့မှာ Pop-Up Camera or Mechanical Camera များ ထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက် တကယ့်ကို မျက်နှာပြင် ဘေးဘောင်မဲ့ ဖုန်းများကို ဖန်တီးပေးပါတယ်။ စကရင်ရဲ့ အထက်မှာ Notch မထည့်ထားဘဲ ကင်မရာများဟာ ဖုန်းရဲ့ ထိပ်ကနေ ထွက်လာတာပါ။ Vivo ကတော့ အရွယ်သေး Pop-Up Camera ကို သုံးထားပါတယ်။ Oppo ကတော့ ဖုန်း ထိပ်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဟာ အထက်ကို တက်လာတဲ့ ဒီဇိုင်းကို သုံးထားပါတယ်။
Oppo Find X ရဲ့ စကရင်ကို အောက်ကနေ အထက်ကို ပွတ်ဆွဲလိုက်တာနဲ့ ကင်မရာ ထွက်လာမှာ ဖြစ်ပြီး Face Unlock ဖြင့် ဖုန်းကို Unlock လုပ်ရတာပါ။ တစ်စက္ကန့်လောက် အတွင်းမှာတင် လျှင်မြန်စွာ Unlock ဖြစ်သွားတာက Wow လို့ ပြောရမှာပါ။ ဟာ့ဒ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာ နည်းပညာနဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲ ဒီဇိုင်း တွဲဖက်မှုက အလွန် ကောင်းပါတယ်။ စမတ်ဖုန်း နယ်ပယ်မှ လူများကလည်း အဲဒီ ဖုန်းနှစ်လုံးကြောင့် အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Pop-Up Camera ပါတဲ့ အဲဒီလို ဖုန်းများမှာ အားနည်းချက်များ ရှိနေပါတယ်။ ခေတ်ပေါ် စမတ်ဖုန်းများမှာ ရေစိုခံ စွမ်းရည်များ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလို ရေစိုခံနိုင်ဖို့ ဖုန်းများကို အလုံပိတ် ဒီဇိုင်း ဖန်တီးထားကြပါတယ်။ Find X ရဲ့ ကင်မရာ အစိတ်အပိုင်းကြောင့် ရေစိမ့်ဝင်နိုင်တဲ့ ပြဿနာ ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖုန်၊ သဲ၊ ချွေးများဟာလည်း Slider Module ထဲ ၀င်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို Mechanical Camera များဟာ ဖုန်းရဲ့ အကြမ်းခံမှုကို အားနည်းစေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက Find X ရဲ့ ကင်မရာကြောင့် Phone Case များ ဖန်တီးဖို့ ခက်ခဲစေပါတယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အာရုံစားစေမှာပါ။
ဒါ့အပြင် ကင်မရာကို အထုတ်၊ အသွင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ လှုပ်ရှားမှုများ ပါလာပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အဲဒီဖုန်းများမှာ စွမ်းအင်စားသုံးမှု များပြားမှာပါ။ အဲဒီအတွက် ဘက်ထရီ သက်တမ်း အားနည်းမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။ Find X မှာ လက်ဗွေရာ ကိရိယာ မပါတဲ့အတွက် ကင်မရာကနေပဲ Unlock လုပ်ရမှာပါ။ အဲဒီအတွက် တစ်ရက်မှာ အကြိမ်များစွာ ကင်မရာကို အထုတ်၊ အသွင်းလုပ်ရမှာပါ။
အကျဉ်းချုပ် ပြောရရင်တော့ Oppo Find X နဲ့ Vivo Nex တို့ဟာ တကယ့်ကို ဘောင်ပျောက် စမတ်ဖုန်းများ ဖြစ်ပြီး အလွန် လှပပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ကင်မရာ ဒီဇိုင်းများကလည်း အလန်းစားပါ။ ဒါပေမယ့် အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အားနည်းချက်များ ရှိနေပါတယ်။ သူ တို့ကို ရောင်းချပြီးနောက်မှာတော့ အဲဒီ ဖုန်းများဟာ လက်တွေ့ကမ္ဘာမှာ အသုံးပြုရတာ အဆင်ပြေမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
Pop-Up Camera မြားဟာ ၂၀၁၈ ခုနှဈ ဖုနျးဒီဇိုငျးအတှကျ အလနျးစားလား ? အဂှမျးစားလား?
Oppo Find X နဲ့ Vivo Nex တို့ဟာ ဒီနှဈရဲ့ Wow ဖွဈစတေဲ့ ဖုနျးနှဈလုံးပါ။ သူတို့မှာ Pop-Up Camera or Mechanical Camera မြား ထညျ့သှငျးထားတဲ့အတှကျ တကယျ့ကို မကျြနှာပွငျ ဘေးဘောငျမဲ့ ဖုနျးမြားကို ဖနျတီးပေးပါတယျ။ စကရငျရဲ့ အထကျမှာ Notch မထညျ့ထားဘဲ ကငျမရာမြားဟာ ဖုနျးရဲ့ ထိပျကနေ ထှကျလာတာပါ။ Vivo ကတော့ အရှယျသေး Pop-Up Camera ကို သုံးထားပါတယျ။ Oppo ကတော့ ဖုနျး ထိပျပိုငျးတဈခုလုံးဟာ အထကျကို တကျလာတဲ့ ဒီဇိုငျးကို သုံးထားပါတယျ။
Oppo Find X ရဲ့ စကရငျကို အောကျကနေ အထကျကို ပှတျဆှဲလိုကျတာနဲ့ ကငျမရာ ထှကျလာမှာ ဖွဈပွီး Face Unlock ဖွငျ့ ဖုနျးကို Unlock လုပျရတာပါ။ တဈစက်ကနျ့လောကျ အတှငျးမှာတငျ လြှငျမွနျစှာ Unlock ဖွဈသှားတာက Wow လို့ ပွောရမှာပါ။ ဟာ့ဒျဝဲ အငျဂငျြနီယာ နညျးပညာနဲ့ ဆော့ဖျဝဲ ဒီဇိုငျး တှဲဖကျမှုက အလှနျ ကောငျးပါတယျ။ စမတျဖုနျး နယျပယျမှ လူမြားကလညျး အဲဒီ ဖုနျးနှဈလုံးကွောငျ့ အုတျအျောသောငျးနငျး ဖွဈသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ Pop-Up Camera ပါတဲ့ အဲဒီလို ဖုနျးမြားမှာ အားနညျးခကျြမြား ရှိနပေါတယျ။ ခတျေပျေါ စမတျဖုနျးမြားမှာ ရစေိုခံ စှမျးရညျမြား ထညျ့ပေးထားပါတယျ။ ဒီလို ရစေိုခံနိုငျဖို့ ဖုနျးမြားကို အလုံပိတျ ဒီဇိုငျး ဖနျတီးထားကွပါတယျ။ Find X ရဲ့ ကငျမရာ အစိတျအပိုငျးကွောငျ့ ရစေိမျ့ဝငျနိုငျတဲ့ ပွဿနာ ရှိပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဖုနျ၊ သဲ၊ ခြှေးမြားဟာလညျး Slider Module ထဲ ဝငျသှားနိုငျပါတယျ။ ဒီလို Mechanical Camera မြားဟာ ဖုနျးရဲ့ အကွမျးခံမှုကို အားနညျးစပေါတယျ။ နောကျတဈခုက Find X ရဲ့ ကငျမရာကွောငျ့ Phone Case မြား ဖနျတီးဖို့ ခကျခဲစပေါတယျ။ မဖွဈနိုငျဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အာရုံစားစမှောပါ။
ဒါ့အပွငျ ကငျမရာကို အထုတျ၊ အသှငျးလုပျတဲ့အခါမှာ လှုပျရှားမှုမြား ပါလာပါတယျ။ အဲဒီအတှကျ အဲဒီဖုနျးမြားမှာ စှမျးအငျစားသုံးမှု မြားပွားမှာပါ။ အဲဒီအတှကျ ဘကျထရီ သကျတမျး အားနညျးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။ Find X မှာ လကျဗှရော ကိရိယာ မပါတဲ့အတှကျ ကငျမရာကနပေဲ Unlock လုပျရမှာပါ။ အဲဒီအတှကျ တဈရကျမှာ အကွိမျမြားစှာ ကငျမရာကို အထုတျ၊ အသှငျးလုပျရမှာပါ။
အကဉျြးခြုပျ ပွောရရငျတော့ Oppo Find X နဲ့ Vivo Nex တို့ဟာ တကယျ့ကို ဘောငျပြောကျ စမတျဖုနျးမြား ဖွဈပွီး အလှနျ လှပပါတယျ။ သူတို့ရဲ့ ကငျမရာ ဒီဇိုငျးမြားကလညျး အလနျးစားပါ။ ဒါပမေယျ့ အထကျမှာ ဖျောပွထားတဲ့ အားနညျးခကျြမြား ရှိနပေါတယျ။ သူ တို့ကို ရောငျးခပြွီးနောကျမှာတော့ အဲဒီ ဖုနျးမြားဟာ လကျတှကေ့မ်ဘာမှာ အသုံးပွုရတာ အဆငျပွမေလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရမှာပါ။
Microsoft ရဲ့ ဒေါ်လာ ၄၀၀ တန် တန်ဖိုးနည်း Surface Tablet လာမည်